Pure White Engineered Stone Slab is made of natural marble or granite gravel asafiller, सिमेन्टको साथ, जिप्सम र असंतृप्त. एक बाइन्डरको रूपमा एक पॉलिएस्टर राल, मोल्डिंग मिश्रण गरेर, पिसाई र बनाइएको पॉलिश.
उत्पाद नाम शुद्ध सेतो इन्जीनियर स्टोन स्लैब
Surface Finished पालिश गरिएको, Hone, Bush Hammer, फ्लेम, र आदि
अनुप्रयोग Flooring tile, TV Background Wall, काउन्टरटप, र आदि
2, Tolerance: +2/-1मिमी.
Hezhou Unisun Stone Co., Ltd. established in 2006, located in Guangxi, China. Unisun Stone is focused on manufacturing Natural Marble and Artificial Marble, which can apply for Countertop, Vanity top, Flooring Tiles, Walls, Windowsills, र आदि, suit for commercial building & residential houses. Equipped with the advanced R&D machines, and excellent engineers.
1, तपाईको कम्पनीको स्थान के हो??
हाम्रो कम्पनी हेजुउ मा स्थित छ, Guangxi चीन. यदि तपाईं भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईलाई धेरै स्वागत छ.
2, तपाईको MOQ के हो??
हाम्रो MOQ सामान्यतया हो 50 वर्ग मीटर.
3, तपाईको डेलिभरी समय के हो??
हामीले जम्मा गरेको delivery हप्तामा वितरणको समय छ.
4.के म ढोका ढोका सेवा पाउन सक्छु?? वा म ढोकामा टाईलहरू पुर्‍याउन सक्छु?
हो, हामी तपाईंको ढोका सेवामा डेलिभरी प्रस्ताव गर्दछौं, जसले तपाईंको काम सजिलो बनाउँदछ.
5.के म पहिले नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?? र यसले कसरी चार्ज गर्दछ?
हो, नि: शुल्क नमूना फ्रेट स collect्कलन वा प्रीपेडको साथ उपलब्ध छ.
6.के हुन्छ यदि संक्रमणको समयमा टाइलहरू भाँचियो?
हाम्रा सबै उत्पादनहरू बीमा द्वारा ग्यारेन्टी गरिएको छ, our after sales will sort out the reasons and will sure you’ll be properly compensated.
ती नियमित ग्राहकहरु को लागी, हामी अविश्वसनीय छुट छ, नमूना निःशुल्क शिपिंग, कस्टम डिजाइनको लागि नि: शुल्क नमूना,कस्टम प्याकेजिंग र क्यूसी अनुकूलन आवश्यकताहरु अनुसार.
8.के तपाईं हाम्रो डिजाइनबाट उत्पादनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ??
हो, हामी OEM गर्छौं.
ट्यागहरू：चीन संगमरमर स्लैब निर्माताहरु, मार्बल निर्माणकर्ताहरू
कृत्रिम क्वार्ट्ज स्टोन स्लैब